22 အဘို့ရလဒ် transformers
ဆိုးယုတ်သောစက်ရုပ်ကာကွယ်ရေးမှသူတို့ကိုမြေကြီးတပြင်သို့ intrude နှင့် Transformer home.Help Transformer သူရဲကောင်း!
ကြောက်မက်ဘွယ်သောနျူကလီးယားစစ်ပွဲဖြစ်ပွားကတည်းကစက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ဦးသည်ကြောက်မက်ဘွယ်လောင်သောမြေကြီး, ခပ်သိမ်းသောအရပ်နှင့်ပြည့်ဝ၏မြည်တမ်းဖြစ်လာသည်, များစွာသောစက်ရုပ်အပိုင်းအစသတ္တု၏ပုံဖြစ်လာကြပါပြီ
cybertron အပေါ်တစ်ဦးမယ့်အပြီးသတ်သည်စစ်တိုက်ခြင်းစွမ်းအင်ကိုဆည်းပူးရန်မြေကြီးတပြင်ရဲ့ catacombs တဆင့်ထရန်စဖော်မာစက်ရုပ်ခေါင်းဆောင်ကိုလမ်းပြ။ ofunnygames.com အပေါ်သာ
ပျက်စီးမှုများကမ္ဘာမြေကိုဖျက်ဆီးဖို့အကြောင်းပါ။ သူ့ကိုရပ်တန့်ဖို့ (Ironhide, Optimus Prime နှင့်ပျားပိတုန်း) သင့် Autobots ကိုရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျအများအပြားအတားအဆီးကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့် energon စုရုံးရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါမြန်နှုန်း key ကိုငါတို့ဥစ်စာဖြစ်လိမ့်မည်! ဒါကြောင့်မြန်ဆန် decepticons မဟုတ်! အမြန်နှုန်းဂြိုဟ် key ကိုမှ decepticons rase ။ အလိုအလျှောက်ထရပ်ကားပုံစံကိုအသွင်ပြောင်းဖို့မြန်နှုန်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း။ ofunnygames.com အပေါ်သာ
ကမ္ဘာဂြိုဟ်သော့သော့ဖွင့်ဖို့အဂြိုဟ် key ကိုသဲလွန်စရှာပါ။ ofunnygames.com အပေါ်သာ!
စက်ရုပ်တိုက်ခိုက်ခြင်း၏လှိုင်းတံပိုးဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့လမ်း Fight! play ရမယ်!
များစွာသောပိုးဟပ် Oggy အပိုးဟပ် hit မှပလပ်စတစ်တူကိုသုံးကူညီ table ထဲမှာရှိပါတယ်။
သင်တတ်နိုင်သလောက်သင့်ရဲ့လှံတံနှင့်အဖြစ်များစွာသောငါးကိုဖမ်း! သတိထားသင်နီးကပ်လွန်းရလျှင်သော်လည်း, ထိုဂဏန်းကသင်၏လိုင်းဖမ်းယူမည်! ညွှန်ကြားချက်များ: ·ချိတ် Move - mouse ကိုသုံးပါ
နာဇီကိုသတ်သူတို့နှင့်မြို့ရိုးကိုဖကျြဆီးမသွားပါစေဘူး! သူတို့မြို့ရိုးကိုဖကျြဆီးခွငျးလျှင်သင်ဂိမ်းရှုံးသည်။ သင်သည်သင်၏မြို့ရိုးကိုပြုပြင်သေချာပါစေ! သင့်ရဲ့မြို့ရိုးကိုဖျက်ဆီးပစ်လျှင်, ဂိမ်းကျော်ပြီဖြစ်ပါသည်။
speedplay FIFA World Cup 2014 ခုနှစ်,
သူ၏ကြီးမားသောရည်မှန်းချက်များနှင့်ကမ္ဘာ့ဖလားအနိုင်ရ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အပြည့်အဝအလားအလာဘောလုံး၏ဤအံ့သြဖွယ်ပြိုင်ပွဲဂိမ်းအနိုင်ရနှင့်ချန်ပီယံဖြစ် GUTS နှင့် technique ကိုနှင့်အတူအကြားလာသောအခါဘောလုံးစာလိပ်၌ပြတော်မူ၏။